whuk-46651 – Page 336 – WunYan
Posted on September 11, 2017 by whuk-46651
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခမှာ ပျက်စီး ထိခိုက်မှု ကြီးမားARSA အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေး တပ်ရဲ့ အပစ်ရပ်စဲရေး ကမ်းလှမ်းချက်ကို မြန်မာ အစိုးရ ဘက်က လက်မခံဘဲ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အစိုးရ ပြောခွင့်ရ ဦးဇော်ဌေးရဲ့ တွစ်တာ ဝက်ဆိုက်ကနေပြီး အစိုးရ အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ စေ့စပ်ဖို့ မူဝါဒ မရှိဘူးလို့ ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ လူသားချင်း စာနာတဲ့ အကူအညီတွေ…
Posted on September 9, 2017 by whuk-46651
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွား လျက်ရှိသော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုးရွားသည့်ဖိအားပေးမှုများ မပြု လုပ်ရန် ရုရှားနိုင်ငံက သတိပေး ခဲ့ကြောင်းSputnik သတင်းဌာန က ဖော်ပြသည်။ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်သော မာရီယာဇာခါရိုဗာက မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ် သည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွား နေချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ အစိုးရအား တစ်ဖက်သတ်ဆန် သည့်အပြင် ဆိုးရွားသည့်အသွင် လည်းဆောင်သော…
ရခိုင်အခြေအနေ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးက မလေးရှားသံအမတ်အား ဆင့်ခေါ်ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက် ပိုင်း အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့် ကွက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော် တင်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား စက်တင် ဘာ ၈ ရက်တွင် ဆင့်ခေါ်၍ ပြော ကြားသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး၏ ထုတ်ပြန်ချက်သည် ပကတိ အခြေအနေမှန်များကို မျက်ကွယ် ပြုလျက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နား လည်မှုလွဲစေနိုင်သည့်…
အိန္ဒိယအခြေစိုက် ANI သတင်းဌာန နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားတဲ့ စကား
‘‘ကျွန်မတို့ ပထမဆုံး စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုက အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားစိ စစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာပါ။ ရှင်တို့ (အိန္ဒိယ သတင်းထောက်များကို ရည်ညွှန်းသည်) အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဆိုလည်း ဒါမျိုးကြုံဖူးမှာပါပဲ။ အိန္ဒိယမှာ မွတ်စလင်အသိုက်အဝန်းကြီးကြီးမားမား ရှိနေတယ်။ ကက်ရ်ှမီးယားလို ဒေသတွေ ရှိတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထဲက နေ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို စစ်ထုတ်ရှာဖွေရတဲ့ ကိစ္စမှာ ရှင်တို့ လည်း အခက်တွေ့မှာပါပဲ။ သာမန်ပြည်သူတွေက အကြမ်းဖက်…
ရင်သားတွဲကျခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲ ? တင်းရင်းအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ ?
အလှအပနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ ရင်သားတွဲကျတာပါပဲ ။ ရင်သားတွဲကျနေခြင်းက အိုရွယ်တဲ့ပုံစံ ပေါက်စေသလို အလှပျက်ကာ ယုံကြည်မှုလည်း နည်းတတ်ပါတယ် ။ အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းကောင်း စီးကရက်သောက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လည်းကောင်း နေထိုင်စားသောက်ပုံလွဲမှားခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ရင်သားတွဲကျမှု ဖြစ်စေပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ ရင်သားတွဲကျမှုပြဿနာနဲ့ တချိန်ချိန်မှာ ရင်ဆိုင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ။ သို့သော် စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး ။ ရင်သားတွဲခြင်းကို…
ကမ္ဘာ့ပါလီမန်များ ညီလာခံတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ဆိုင်သော ကြေညာချက်တွင် လက်မှတ်မထိုးရန် အိန္ဒိယဆုံးဖြတ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ရခိုင်ပြည် နယ်အရေးနှင့်ဆိုင်သော ကြေညာ ချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ရာ၌ ပါဝင် လက်မှတ်မထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြောင်း Stateman သတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။ ကမ္ဘာ့ပါလီမန်များ ညီလာခံ အား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ ခဲ့ရာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ဆိုင်သော ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ရာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင် သော မွတ်စလင်များ အကြမ်း ဖက်ခံရခြင်းနှင့် နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမှုခံရခြင်းများ ကြုံတွေ့နေခြင်း…
သင့်ရဲ့လက်ဖဝါးပြင်မှာ “M” လက္ခဏာ ပုံစံလေး ပါမယ်ဆိုရင်တော့
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးပြင်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ အသက်လမ်းကြောင်း၊ ပညာရေး လမ်းကြောင်းနှင့် နှလုံးလမ်းကြောင်းက ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ “M” ပုံစံလေး ပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေက ကိုယ့် ဒူးကိုယ်ချွန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြတယ်။တစ်ကိုယ်သမားစိတ်ဓာတ်မရှိပဲ အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုလက်တွဲ ခေါ်တက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် နေရာတစ်ခုမှာအကြီးအကဲဖြစ်တက်တယ်။ သနားကြင်နာတက်သော လူမျိုးဖြစ်ပြီး စွန့်ဦး တီထွင်တက်သူတွေလည်း ဖြစ်တက်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု့ကောင်းမွန်ပြီး နာမည်ကောင်းများလည်း ကျန်ရစ်နေမဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက…
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေလို ရှည်ရှည်သွယ်သွယ် ကလေးတွေမို့ အနောက်နိုင်ငံက လူတွေက Ladies’ finger လို့ ခေါ်တဲ့ ရုံးပတီသီးလေးတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာတော့ သိပ်ကို လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ဈေးသက်သက်သာသာ ရနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တစ်မျိုးပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ဝမ်းချုပ်တဲ့ ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရပြီး လတ်တလောမှာတော့ အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်ပြီး လေချဉ်တွေတက်တက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နှစ်ရှည်လများ ခံစားခဲ့ရပြီး…
ခါးနာနေသောဝေဒနာရှင်က မိမိတစ်ခါတည်းစား၍ ကုန်နိုင်မည့်အနေတော် ထန်းလျက်သုးံလုးံကို လက်တွင်ဆုပ်ထားပါ ထို့နောက် အင်္ကျီချွတ်၍ ချောင်းသို့မဟုတ် မြစ်ထဲသို့ ဝေဒနာရှင်၏ “ချက်´´ ရေမြုပ်သည်အထိ ဆင်းပါ ။ ချက် ရေမြုပ်သည့် နေရာတွင် ရပ်၍ လက်ထဲတွင်ဆုပ်ထားသော ထန်းလျက်သုးံလုးံကို တစ်ခါတည်း ကုန်အောင်စားပါ စားပြီးပြီးခြင်း ရေမသောက်ရ ရေထဲမှ ပြန်တက်လာပြီး အဝတ်လဲကာ အဝတ်ခြောက်ဖြင့် ရေအားလုးံခြောက်သွားအောင် သုတ်ပစ်ပါ။ ပြီးနောက်…
YBS ကားပေါ်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု
ဒီနေ့ ကျမ နာရီဝက်စောပြီး ရုံးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တိုင်ရောက်တာနဲ့ ၇၅ ကားရောက်လာလို့ စီးခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေး မှတ်တိုင်ရောက်တော့ ကားရပ်ပြီး ကားမောင်းသူ ကားပေါ်က ဆင်းကာ ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ကွမ်းဝ ယ်စား အခြားဈေးရောင်းသူများနှင့် စကားပြောလုပ်နေပြီး တော်တော်ကြာမှ ကားပေါ်ပြန်တက်လာပါတယ် ။ ကားပေါ် ရောက်ပြီးသော်လည်း ကားမထွက်သေးဘဲ နောက်ကား မတွေ့သေးဘူး စောင့်ဦးမယ်ဟု ဆိုကာ စပယ်ယာ (ယာဉ်အကူ)…
Previous 1 … 335 336 337 … 374 Next